काठमाडौं, असोज २७ गते । हिन्दुहरुको महान चाड दशैं यतिबेला धुमधामसँग मनाइँदैछ । राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सर्वसाधारण आफ्नो गाँउ घर फर्किइसकेका छन् । मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्न नेतादेखि सर्वसाधारण आफ्नो घरमा जम्मा हुन्छन् । यो वर्ष राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले कहाँ र कसरी दशैं मनाउँदै छन् ?
डा. डिला संग्रौला,
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला भने दशैं मनाउन सप्तमी अर्थात् असोज २६ गते विराटनगर जानुभएको छ । ‘कोरोना महामारीका कारण पोहोर जिल्ला जान पाइएन । यसपटक विराटनगर जान्छु, त्यहाँ हाम्रो संग्रौला परिवारको सबैभन्दा जठो सदस्य मेरो ससुरा हुनुहुन्छ, उहाँको हातको टीका लगाउछु । परिवारमा आफन्तजनहरु आउनुहुन्छ, उहाँहरुलाई टीका लगाएर दशैं मनाउने योजना छ,’ संग्रौलाले भन्नुभयो ।